Ngayiphi igama le-keyword yakwa-Amazon elingu-tracker onokuyincoma ukuba i-newbies?
Ukuba unomtsha kwiindawo zokuthengisa ezikhuphisanayo nokunyanisekileyo ezifana ne-Amazon, uza kujongana nomngeni onzima. Into enjalo kukuba akuyona into elula ukuphumelela kwishishini lakho lokuthutha. Kwaye akukho mfuneko yokuba abathengisi bokuqala bafumana amathuba ambalwa okusinda kwi-Amazon kunye nokuhlonywa kwawo kwemveliso esandula kutshanje. Okufana nokuncintisana kokukhangela kwe-Google kwi-Google, ukuphumelela kwezoshishino zokuthutha kuhlale kuhluma kwi-pool echanekileyo ekhethiweyo kwii-key key target - dominio .com gratis. Enyanisweni, ingcamango ye-Engine Engine Optimization (SEO) yinto yonke malunga nomxholo kunye namagama angundoqo. Khumbula, umxholo uyinkosi, kunene? Kodwa ngokusebenzisa ibhizinisi lokuthumela i-drop-down e-Amazon, i-toolkit ye-tracker toolkit yamagama angundoqo ayisekho i-luxury nje ekunikezeni inzuzo ethile phezu kwakho kwimakethi.
Akunjalo nje kuphela, kodwa wonke umthengisi wexesha elikhulu e-Amazon usebenzisa izixhobo zokulandelela i-tracker kunye nesofthiwe yophando ukuba ahlale ehlaziywa kwaye aqhubeke eshukumisa isinyathelo esithile phambi kwabaqhubi abasondeleyo . Yonke into idinga ukulawula okuchanekileyo nokuqhubekayo-ukuqala ngophando olungundoqo lwegama elingundoqo, ukulungiswa kohlwini lwemveliso nokulawulwa kwamanani. Yingakho nje ngokuba ngumthengisi we-novice ukhuthazwa ukuba uqhubeke ngokukhetha i-keyword ye-Amazon engundoqo ye-key tracker, ubuncinane ukuba ube nesiqalo sokuqala esiqinileyo. Ngoko, kukho uluhlu olufutshane lwezinto ezikhethiweyo ezikhethiweyo ukuba uthathe isigqibo kwaye ekugqibeleni usethe uludwe lwemveliso oluthengisa. Ngenhlanhla kukho ubuninzi bezinto ezilula kodwa zisenza izixhobo ezifanele ukuzama phambi kwayo nayiphi na into.
Uluhlu lwe-Amazon Keyword usetyenziso lwee-Solutions ze-Tracker Kunconywe kubaqalayo
I-toolar yegama elingundoqo ye-Sonar ibheja ngokukrakra kwi-search and complexing algorithms ukuqokelela yonke idatha edibeneyo esetyenziswe ngabathengi be-Amazon . Nangona abanye abantu bethetha ukuba ayikho enye inkqubela phambili, intsebenzo eninzi yeyona njongo eyenza iNonar ibe yinto ekhethekileyo yokukhetha yonke i-newbie, ekubeni isandul 'ukunyuka kwinkampani yokuthumela i-drop-down okokuqala.
I-Keyword Tool iyona ndlela efanelekileyo yesibini ukuqala kunye nokufumana amagama angundoqo amagama okwenza uluhlu lwemveliso - ngokukhawuleza kwaye kulula. Ukongezelela - kunye neprogram ephezulu yeProgram ekhoyo kubadlali abanamakhono, unokwenza uguqulelo lwalo olusisiseko lwe-kickstart, ukutshintshelwa kuhlalutyo olubanzi olufuna ubuncinane ukuqonda kwakho okusemgangathweni kwintsimi.
Amazwi omthengisi nguye inkokeli epheleleyo xa kuvela ekuphuhliseni ibinzana elithile elingundoqo lomsila. Umqobo kuphela wokuba abathengisi abathile banokujamelana nengxaki yokufumaneka kwilizwe labo okanye kummandla wabo.
I-KeywordInspector iya kuba yisisombululo sakho esifanelekileyo ukuba ufuna ukuba uluhlu lwemveliso yakho kwi-Amazon ukuba luhlale lukhuphiswano, ngenxa yokuba umrhumo wenyanga nganye malunga needola ezingama-40 ayikho indleko ephezulu yokuqalisa kwakho.
Isicwangciso seScientific Seller sichaza ngamagama. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba ichanekile ngokwaneleyo ukuthatha iyure epheleleyo okanye ngaphezulu kwi-search engundoqo yegama elingundoqo. Nangona kunjalo, isisombululo esiphezulu sokwenza ukuqonda ngokucacileyo kwegama elingundoqo kwi-Amazon. Ngokuqinisekileyo, ngaphandle kokuba ungaxhaswanga kwizinto ezizodwa zokuzibeka kunye nokuphendula.